दुलेगौंडाको आइमाईलाई चिकेको सत्य कथा
नमस्कार मेरो नाम बिकास मगर हो । म हाल दुलेगौंडा, तनहुँमा बस्छु । अध्यनको शिलशिलामा बसेको म, हाल ब्यालचर थर्ड एयरको एक्जाम दिएर रिजल्टको पर्खाईमा छु । यसो त म कयौँ काल्पनिक यौन कथाहरु लेख्ने गर्छु तर यो मेरो वास्तविक कथा हो । म पढ्न भनेर बसेपनि प्रायजसो दुलेगौंडाको भालु ठोक्दै हिँड्ने गर्थेँ । तीन चार बर्षको अन्तरालमा मैले दुलेगौंडाको लगभग दस बाह्रवटा भर्जिन र सुड्डीहरुलाई ठोकिसकेँ । यो कथा तिनै सुड्डी मध्येको अन्तिम सुड्डीसँगको चिकाईको कथा हो ।
म दुलेगौंडाको बोको नै हुँ भनेर प्रायः भालू र सुड्डीहरुलाई थाहा नै थियो । एकदिन दिउँसोको नास्ताको लागि म फलफुल पसल गएको थिएँ । त्यहाँ मेरो आँखा एउटा यस्तो मालमाथी पर्यो म त फिदा नै भएँ । कसैगरी यसलाई पनि ठोक्नुपर्छ भनेर मनमनै प्लान गराएँ । आखिर दैबको आहारा अजिङ्गरले जुराउँछ भनेझै तिनदिन पछि उसँग मेरो फेरि भेट भयो उनी मेरै रुमको छिमेकी रैछ । म बहाना झिकिझिकी उसको घर गएर कामुक कुराहरु गरिगरि उसलाई मेरो बसमा पार्न सफल भएँ । आखिर एकदिन उसले मलाई रात कटाउन बोलाई र म पनि गएँ ।
उसको घर पुगेर ढोका नक गर्न खोज्दै थिएँ, खुल्लै छ आउ भने भित्रैबाट उनी बोली । म भित्र छिरेको उनी त पुरै तयार भएर भइसकेकी रहेछ । मैले उसलाई भित्र पस्नसाथ ढोका लक गरेर टङ किस गर्न सुरु गरिहालेँ ।
यसरीनै हाम्रो फोर फ्ले सुरु हुन थालिहाल्यो ।
“माई गड तिमीलाई पहिलोचोटी साडीमा देख्दा कस्तो सेक्सी देखिएकी थियौ कि मेरो त लाडो नै सनन भएको नि,” मैले उनको कपाल मुसार्दै भनें । “हुन्छ ! मलाई कता देखेको थियौ ?” उनी मेरो लाडो जीन्स पाइन्ट बाहिरै सुमसुमाउँदै दबाउँदै भन्दै थिइन् ।
म सोफामा बसेको थिएँ । उनी चाहीँ सोफामै बसी बसी झुकेर मेरो काखमा ढल्कँदै थिइन् ।
“स्याउ दोकानमा के ! तिमी साडीमा यस्तो सेक्सी देखिएको थियौ कि, मैले अहिलेसम्म कुनै केटीलाई साडीमा त्यति सेक्सी देखेकै छैन । कस्तो टाईट फिटीङ्ग र कति तल साडी लाएको त ? तिम्रो पुतिको माथिल्लो भागको डाम नै देखिएको थियो ।
म त स्याउ छानौं कि तिम्रो नाईटोमुनिको पुतिको डाम हेरौं भएको । मैले त हेरि नै रहें । त्यस्तै ब्लाउज पनि कति छोटो भने दुधको मुन्टो मात्रै नदेखिने हाफ ब्लाउज । तिम्रो दुध त मुन्टो बाहेक सबै देखेको भन्दा पनि हुने । घरी घरी साडीको सप्कोले पनि दुध छोपेको जस्तो गर्ने ।
तिमी चाहीँ झन् थाहा नपाएको गरी अलि अलि घोप्टीएर स्याउ छान्दै थियौ,” मैले उनले लाईराखेको भेष्टभित्र हात हाल्दै दुधमा पुरयाउँदै भनें । ब्रा रहेन छ ।
“ए हो ?,” उनले टाउको घोप्टो तरिकाले मेरो काखमा राख्दै म तिर हेर्दै भनिन्, “तिमीलाई सेक्स अपिल गरेको नि । तिमी चाहीँ कुरै नबुझ्ने लाटा ।” यसो गर्दा उनको एउटा हात मेरो लाँडो थिच्नमै व्यस्त थियो ।
“अनि तिमी पनि कति चेपारे तरिकाले स्याउ किन्दा बोलिरहेको थियौ । कस्तो टाईट फिटीङ्ग साडी लाएको भने, अहिले त लाउन्नौ त ?” मैले दुधको मुन्टो दुई औंलाले खेलाउँदै भनें ।
“मैले भनिन ? तिमीलाई सेक्स अपिल गर्न, आकर्षित गर्न के ?” काखबाट टाउको अलिक उठाउँदै मेरो जिन्स पाईन्टको फस्नर खोल्दै भनिन् ।
सोफामा बसेपनि उनी झुकेर टाउको मेरो काखमा परेकोले उनको शरिर मेरो लागि मादल जस्तो भएकोले मैले पनि एउटा हात उनको चाकमा डुलाउन थालें । उनले मिनी स्कर्ट लाएकी थिइन् । हात विस्तारै दुईटा खुट्टाको विचमा भएको सबैभन्दा लोभलाग्दो ठाउँ पुतिमा पुग्यो । पेन्टीपनि रहेन छ ।
आजकल म उनकोमा आउने भएपछि यसरी नै सेक्सी ड्रेसमा ब्रा र पेन्टी नलाई बस्छिन् ।
ब्रा र पेन्टी लाएकी छिन् भने पिरीयडमा छिन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सेफ पिरीयडमा उनलाई चिक्न मन लाग्यो भने आफै फोन गरेर बोलाउँछिन् । पिरीयड भएको बेला कहिलेकाहीँ म आईपुगेर धेरै उत्तेजित भएँभने मुख र हातले नै फुसी झारिदिन्छिन् ।
“अनि ?,” उनले फस्नर खोलेर लाँडो निकाल्दै भनिन् । “नुहाएर आएको हो ?” उनले सोधिन् ।
मैले, “बिहानै नुहाएको” भनें ।
उनले लाँडो खेलाउन थालिन् । कान्छो भाईको टुप्पामा अलि अलि पानी रसाउन थालिसकेको रहेछ । त्यो रसलाई औंलाले दबाएर सोधिन्, “अनि स्याउ दोकानको कुरा भन्नु नि ?”
“एक चोटी तिमी यसो झुकेको थियौ । तिम्रो त सप्पै दुध नै देखे जस्तो भयो मलाई त ।
अनि साडी पनि कतिचोटी मिलाउन खोज्यौ भने मेरो ठन्केको लाँडो अरुले देख्छ कि भनेर म त हैरान भएँ । लाँडो नै टनटनाएर आयो । घर पुगेर बाथरुममा छिरेर हेरेको त अण्डरवेयर मै चिप्लो पानी पानी भएछ । ३६ गरेरै चित्त बुझाएँ नि ।”
मेरो पनि औंला उनको दुई तिघ्रा विचको पुतिमा पुगिसकेको थियो । पुति तातो रनक्क र भुक्क उठेको थियो । रौंमा रिमुभर लाएकोले रौं पातलो मात्रै थियो । दुई औंलाले चिरिएको पुतिलाई फटयाउने कोशिस गरें ।
“हि…. हि….,” उनी त मेरो लाँडो तल माथि गर्दै हाँसिन् पो । “केटाहरुलाई कति सजिलो छ हई ? हाते दियो, झारयो, पुग्यो ।”
यति भनेर पानी रसाईरहेको लाँडोको टुप्पोमा जिब्रोले टुच्च छुइन् । उह… क्या मज्जा । अनि विस्तारै लाँडोको टुप्पोमा दुई ओंठले च्वाप्प पारिन् । म झन् सनक्क भएँ । लाँडो त झन् … लाँडोको टुप्पोबाट पानी नै झरयो क्यारे । उनलाई भने त्यहीँ स्वादिलो लाग्ने ।
“मैले हेरेको र तिमीले देखाएको हाउभाउ स्याउ बेच्ने फुच्चीले पनि थाहा पा[छ । पछि जाँदा के हो अंकल, आन्टीलाई त्यतिसाह्रो घुर्नुपर्छ पो भन्दै थियो त ।” मैले माझी औंला पुतिमा छिराउँदै भने । उनको पुतिले पनि पानी फ्याक्न थालिसकेको थियो ।
“ये त्यो केटी त चालु पो छ है । सेक्स पार्टनर बनाउला नि फेरि ?” मेरो लाँडोबाट मुख हटाउँदै उनले इर्ष्यालु तरिकाले हेर्दै भनिन् ।
“तीन जनासम्म त खुशी पार्ने पावर छ हौ,” मैले माझी औंलालाई टिसीमा दबाउँदै भनें, “एकै पटक दुईजनासम्म पनि सकिन्छ ।” “के रे ?” भन्दै उनी उठिन् ।
उठेको मौका पारेर देब्रे हात उनको टाउको पछाडी लगेर मेरो मुखनिर ल्याएँ । यसो गर्दा उनको ओंठ मेरो ओंठमा जोडियो । उनीपनि मेरो काखमै बसिन् र शुरु भयो किसको । मेरो काखमाथि बसेकोले उनको पुतिनिरै मेरो लाँडो पनि थियो ।
झण्डै झण्डै छिर्नै लाग्ने गरी । तर पुतिमा छिरीहालेको चाहीँ होइन । सायद हामी दुबै फुल नेकेड भएको भए उनको पुतिमा मेरो लाँडो छिथ्र्यो । तर उनको मिनी स्कर्ट र मेरो जीन्स पाईन्ट पुरै खोलिएकै थिएन ।
किसीङ्गमा पनि यिनी माहिर छिन् । यति मादक किस गर्छिन् कि …. भन्ने शब्द नै छैन ।
घरी जिब्रोले माथिल्लो र तल्लो ओंठ पालैपालो खेलाउछिन् । अनि मुखभित्रै जिब्रोले जिब्रो गोलो तरिकाले लपक लपक गरेर खेलाउछिन् । अनि जिब्रो दुई ओंठले लपक्कै बाहिरै तानिदिन्छिन् । मुखभरी थुक पारेर गर्ने उनको किसीङ्गको वर्णन गर्ने शब्द छैन ।
उनको किसिङ्गले असहय भयो । त्यतिकै झर्ला जस्तो भयो । त्यसैले एउटा हात तल लगेर समाएर उनको पुतिनिर लाँडो सोझ्याउन खोज्दै मात्रै थिएँ ।
“के हो हाम्रो चाहीँ स्वाद नलिने ?” भन्दै मेरो काखबाट हटिन् । उभिएरै मिनी स्कर्टपनि पनि तल सारिन् । भेष्टपनि फुकालिन् । अब उनी पूर्ण नांगो भइन् । र सोफामै मेरो छेउमै बसिन् । बस्दा जीउ पुरै ढल्किनेगरी बसिन् ।
यसो गर्दा उनको चाक सोफाको छेउमा परयो र पुति सजिलो हुने गरी बाहिर आयो । यस्तो हामीले पहिलेपनि गरिसकेको थियौं । त्यतिमात्रै होइन, भुईंको कुर्कुच्चा पनि उठाइन् । अनि एउटा हातले मेरो एउटा हात समाएर पुतिनिर पुरयाईन् ।
मैले कुरा बुझें । अब झुक्ने र भुईंमा बस्ने पालो मेरो थियो । भुईंमा बस्दै झुकेर पुतिमा जिब्रोले लपक्क चाटें । पुतिको माथिल्लो भागमा पातलो र छोटो रौं भएपनि वरिपरी र तलको भाग सफाचट थियो ।
“उइइइ…..” गरेर तलदेखि चाक जुरुक्क उठाइन् । मैले पनि मेरो जिन्स पाईन्ट र भेष्ट खोलेर भुईंमै फालिदिएँ ।
मेरो जिब्रो पनि कमको छैन । मेरो जिब्रोको स्वाद पाईसकेपछि यौन साथी केटीहरु मलाई छाड्नै मान्दैनन् । वाध्य भएपछि मात्रै । म उठेर कार्पेटमै बसें । अनि पुतिनिर जिब्रो पुरयाएर लपक्कै मुख जोतिदिएँ ।
“उहहहह …. आहह……” गरेर एउटा खुट्टा मेरो काँधमाथि राख्दै तलदेखि दुई तीन चोटी चाक जुरुक्क जुरुक्क गरेर उचालिन् । पहिला पुतिको तल माथि सबै चाटें । त्यसपछि टिसीमा जिब्रोले नै दवाब दिएँ ।
जिब्रोको टुप्पो बनाएर टिसीलाई वरिपरी पारेर खेलाएँ । उनी तलदेखि झन् जुरुक्क उचालिइन् । मैले केही बेरपनि टिसीलाई बुढि औंलाले दबाएँ र जिब्रो चाहीँ टिसीभन्दा तलको दुलोमा जिब्रो पसिञ्जेल पसाएँ ।
“आम्मा .. मरें …. भयो ….. छिटो ……” भनिन् र पुतिबाट फेरि पानी झारिन् । उफ …. कस्तो नूनिलो स्वादको पानी ? कस्तो स्वादिलो । कस्तो …. धेरै केटाले पुतिको पानीको यस्तो स्वादिलो स्वाद चाख्नै पाउँदैन ।
जिब्रोले पुतिको तल्लो भागदेखि टिसीसम्मै हल्का दवाब दिएर चार पाँच चोटी चाटें । उनले खुट्टा झन् फाटिन् र भनिन्, “मरें हो, छिटो त्यो फलामको रड घुसाउनु न ।”
अब चाहीं फोर प्ले सकाउनु परयो भनेर मुख उनको मुखमा लगेर टाँसिदिएँ । उनले एउटा हातले मेरो टाउको पछाडीबाट कपाल खेलाउँदै मेरो जिब्रो लपक लपक गरेर चुस्न थालिन् भने अर्को हातले मेरो लाँडो समाएर उनको पुतिमा सोझ्याइन् । लाँडो साँच्चै नै फलामको तातो रड जस्तै भएको थियो ।
पुति पानीले पुरै भिजेको र लाँडोपनि रयालै रयाल भएकोले उनले सोझ्याएको ठाउँमा उनले नै मुनिदेखि चाख हल्का उचालेको के थिइन्, लाँडो पुतिमा सुलुत्तै पस्यो । “उइइइइइ माँ ….. मरें …..” उनको मुखबाट निस्क्यो । मैले, “के भयो ? दुःख्यो ?” भनें ।
उनी चुपचाप थिइन् । मलाई थाहा थियो, त्यो उनलाई दुःखेर मरें भनेको होइन, बरु स्वर्गको आनन्दले भनेकी हुन् । म पनि चिक्ने समयमा केटीलाई उत्तेजित अवस्थामा जिस्काउनमा माहिर खेलाडी हँु । बरु नहल्लिई केही बेर लाँडो पुतिमै पसाईराखेर पर्खें । पुतिभित्रको तातोले लाँडो झन् रनन भएर रन्क्यो ।
“हल्लिनु न, कस्तो मार्नै खोजेकोे !” तलैदेखि हल्का धक्का दिएर उनले भनिन् । मैले उनलाई यसो हेरें । आँखा चिम्म गरेकी थिईन् । अब चाहीँ पुरै बाटो खुलेको ठानेर शुरुमा पाँच सात पटक हल्का धक्का दिएँ ।
त्यसपछि स्पीड बडाएँ । उनले पनि मेरो पेलाईमै तलदेखि पनि हल्लिएर तालमा ताल मिलाउन थालिन् । समय समयमा टाईमिङ्ग मिल्दैनथियो । त्यसो हुँदा लाँडो पुतिबाट फुत्त बाहिर निस्कन्थ्यो । म चाहिँ झन् लाँडोले पुतिको तलैदेखि सोरेर टिसीपनि दवाब पर्नेगरी लाँडो झन् गहिरो हालिदिएँ ।
यसो गर्दा उनलाई झन् आनन्द हुँदो रहेछ । उनी, “उइइइइ आम्मा” भन्दै तनक्क परेर खुट्टा झन् फारिन् । कहिले त एउटा खुट्टा मेरो काँधमै ल्याईपुरयाउँछिन् । कहिले एउटा खुट्टा मेरो टाउकामै राख्छिन् ।
करिव ३–४ मिनेट उनी सोफामा मुनि र म माथिबाट घुँडा टेकेर चिकाचिक गरेपछि मलाई आसन फेर्न मन लाग्यो । मैले, “अर्को स्टाईलमा” भनें । र उनको पुतिबाट लाँडो निकालेर सोफामा उनी बसेको जस्तो म बसें । उनले कुरा बुझिन् । यिनीपनि विवाहित भएकोले अनुभवी थिइन् ।
मसँग यौन साथी भएकोपनि छ सात महिना भईसकेको थियो । महिनामा कम्तिमा एक पटक यिनीसँग सेक्स गर्नैपर्छ । सुरक्षित पिरीयडमा यिनी आफै फोन गरेर घर बोलाउँछिन् । काम गर्ने केटीलाई घर पठाउँछिन् र म सँग लगातार दुई तीन दिन चिकाउँछिन् । अरु त त्यस्तै हो, यो दुई तीन दिन चाहीँ खुब खान पाईन्छ । उनी आफै सेक्स शक्ति बढाउने खानेकुरा खान्छिन् र खुवाउछिन् ।
आफू परियो डेरामा बस्ने । दिउँसो अफिस गयो, बेलुकी आयो अनि डेरा र पानी फेरयो । अन्य बेला पनि सेक्स चाहना भएपछि बोलाउँछिन् । मलाई सेक्स चाहना हुँदा पनि फोन गर्ने । बोलायो भने यहाँ आउने । बोलाएन भने अर्कीलाई फोन गरयो । ३ जना यौन साथीमा एकजनाले त बोलाईहाल्ने । त्यहाँ अफिस भईञ्जेल यी बाहेक अर्को १ जना र स्याउवालीसँग खुब चिकाचिक गरियो ।
उनी म माथि चडिसकेकी थिईन् । मैले लाँडो समाएर उनको पुतिको दुलोमा सोझ्याएँ । पुति र लाँडो दुबै हिलोसरी भईसकेको थियो । त्यसैले लाँडो स्वात्त पस्यो । दुध मेरो मुखनिर थियो । मैले एक हातले दुध माड्दै अर्को दुधको मुन्टोमा जिब्रोले खेलाउन थालें । उनी “आ … आ..ह…” भन्दै हल्लिन थालिन् । मेरो पनि एउटा हात उनको पछाडीको चाखमा पुग्यो । र तलदेखि मैले पनि तालमा ताल मिलाउन थालें ।
उनको एउटा हात उनकै पुतिमा पुरयाएर औंलाले टिसीमा दबाव दिईन् । “उहहह … उहह……” हल्लिदै आवाजपनि निकालिरहेकी थिइन् । तीन चार मिनेट त्यसरी हल्लिंदा मेरो फुसी झर्न खोजेको जस्तो भयो । मैले, “आहहह …” भनें । धेरै चोटी सेक्स भइसकेकोले उनले बुझिन् । मेरो माथिदेखि झरिन् । पहिलाजस्तै सोफामा बसिन् ।
यिनलाई चाहीँ तातो फुसी नाइटोको वरिपरी भुँडी, दुधको मुन्टो र दुई तीन थोपा मुखमा पर्ने गरी झारि दिनुपर्ने । यिनलाई यो नै मन पर्ने । त्यस्तो बेला, “स्वर्गिय आनन्द मिल्छ” भन्छिन् । फरक फरक केटीको फरक फरक चिक्ने चाहना हुने ।
मैले उनको अनुहार हेरें । यौनानन्दले हल्का रातो र सन्तुष्टीको मन्द मुस्कानका साथ मेरो लाँडो समाएर खुट्टा पुरै फारेर पुतिमा राखिदिइन् । मैले पनि ल्वात्तै दुलोमा पसाईदिएँ र स्वात्त स्वात्त धक्का दिएँ । प्वाक प्वाक गरेर आवाज पनि आयो ।
“उइइ आम्मा …” भन्दै उनी तनक्क भईन् र तलदेखि धक्का दिईन । आठ दस धक्का के भएको थियो, म खलाँस हुने अवस्थामा पुगें । मैले हतार हतार गरेर लाँडो पुतिबाट निकालें र उनको नाईटो नेर पेटमा राखिदिएँ । मैले “आह … आह …” भन्दै पिचिक्क पिचिक्क गरेर सेतो फुसी उनको पेटमा झरयो । केही थोपा दुधसम्म पुग्यो । उनले नै फुसी झरिरहेको लाँडो समाएर अलिक झुकिन् । यसो गर्दा एक दुई थोपा उनको मुखमै पुग्यो । फुसी झरिरहँदा मेरो जिउ तनक्क तनक्क भयो ।
मैले उनको अनुहार हेरें । उनी मुसुक्क हाँसेर, “बदमास .. कति लामो पिच्कारी गर्न सकेको होला ? मुखसम्मै आईपुग्ने ।” भनिन् । मलाई थाहा थियो, उनलाई वास्तवमा फुसीको स्वादपनि मन पर्न थालिसकेको थियो । त्यसैले सबै नभएपनि दुई तीन थोपा फुसी उनको मुखमा पर्दा झन् खुशी हुन्थिन् । परेन भने औंलाले फुसी खेलाउँदै मुखसम्म पुरयाउँथिन् र फुसीको स्वाद लिन्थिन् ।
म शिथिल भएँ । उनले मेरो टाउकोमा हातले बेरेर किस खान मेरो मुखमा मुख जोडिन् । मैले उनलाई सोफामा तेर्सो पारें । र उनको मुखमा मुख जोडेर सोफामै उनीमाथि लम्पसार भएँ । सोफा साँघुरो भएपनि हामीलाई साँघुरो भएको थिएन । दुबै पुरै नांगो थियौं ।
माल झरिसकेकोले शिथिल भएपनि उनको हात मेरो जीउको विभिन्न भागमा मसाज गरेको जस्तो दौडिरहेको थियो । मेरो हातपनि उनको जीउको विभिन्न भागमा दौडिरहेको थियो । मुखमा मुख खप्टीरहेको थियो । मुखभित्र जिब्रो लपक लपक गरिरहेको थियो । उनी मसाज केन्द्रमा काम गरेको अनुभव भए जत्तिकै सेक्सपछिको चरणमा औंला चलाउँथिन् ।
उनको मसाजले कहिलेकाहीँ फेरि लाँडो समेत उठाइदिन्थिन् । र हामी फेरि चिकाचिक गथ्र्यौं । तर कहिलेकाहीं त्यस्तो चिकाचिक लामो समय हुन्थ्यो, वाक्क लाग्ने गरी । यो पटक चाहीँ करिव पाँच मिनेट साँघुरो सोफामा एक आपसमा खप्टेर मलाई मसाज गरिरहिन् ।
त्यसपछि उनी उठेर लुगा नलगाई पुरै नांगो अवस्थामा बाथरुमतिर लागिन् । उनी बाथरुमदेखि फर्कंदा म हल्का निंद्रामा पुगिसकेको थिएँ । उनले मेरो निधारमा हल्का किस गरेको र पुति मेरो मुखनिर ल्याएको थाहा पाएँ । मेरो ओंठमा उभि उभि पुति हल्का छुवाईन् । बिहे भएका २५ – ३० को केटीहरु “कति साह्रो यौनको भोको हुन्छन्” भनेर सोच्दै सुतिरहें ।
दुलेगौंडाको आइमाईलाई चिकेको सत्य कथा 2017-08-23T00:45:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
18+ story Adult Literature adult xxx story erotic story fucking story Nepali Sex Story Sex Story चिकेको कथा नेपाली युवा साहित्य नेपाली सेक्स ब्लग यौन कथा
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: दुलेगौंडाको आइमाईलाई चिकेको सत्य कथा